जिउँदै मान्छेलाई सामाजिक संजालमा श्रद्धाञ्जली आउदा चकित ? - Nice Samachar
सुरेश छन्त्याल २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार १८:१५ 223 पटक हेरिएको
बागलुङ । शनिबार दिउसो गलकोट अपडेट र गलकोट बागलुङ नेपाल फेसबुक एकाउन्टबाट जिउदो मानिसलाई श्रद्धाञ्जली दिएको भेटिएको छ । गलकोट नगरपालिका वडा नम्वर १० का वडा अध्यक्ष तिलक घर्तीलाई श्रद्धाञ्जली दिइएको थियो । ती दुवै फेसबुक एकाउन्टमा ‘निष्ठुरी दैव, तलाई नी राम्रै मान्छे चुन्नु पर्ने ? गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर १० पाण्डवखानीका वडा अध्यक्ष र नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ जिल्ला अध्यक्ष समेत रहनु भएका तिलक मगर जी प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चान्हाछौ ।रेस्टि इन पिस । शोकाकुल परिवारलाई धैरै धारण गर्ने शक्ति मिलोस्’ भन्दै दुख व्यक्त गरिएको छ ।
अध्यक्ष मगरले इन्टरनेट अवरुद्ध भएको कारण त्यो पोस्ट तत्कालै हेर्न सक्नु भएन । साँझ मात्रै त्यो पोस्ट देखेपछि अध्यक्ष मगरले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट मार्फत आफू सकुशल रहेको जानकारी गराउनु भएको छ ।
अध्यक्ष घर्तीले आफ्नो फेसबुक एकान्टमा लेख्नु भएको छ । ‘कोहि मित्रले जे साँेच्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवानको कृपाले त्यो अहिले नै नहोस्, आखिर जन्मसँगै मृत्यु सत्य छ । केही मित्रजनबाट मेरो बारेमा मृत्यु परान्त दिइने सद्भाव प्रकट गर्नु भएको रहेछ । मेरो शुभ चिन्तक आफन्त तथा सम्पुर्ण साथीहरूमा यो गलत भएको र म सकुशल रहेको जानकारी गराउदछु ।’
‘विहानैदेखि फोन इन्टरनेटले कामै गरेको थिएन, त्यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालहरु पनि हेर्न पाएको थिएन, फोन पनि भएको थिएन, दिउसो एक्कासी गलकोट नगरपालिकाका मिनराज गैरे सरले फोन गरेर त्यस्तो कुरा सुनाउँदा म आफै झस्किए, त्यसपछि धेरै सार्थीहरुले फोन गर्न थाल्नुभयो’ अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो । त्यो पोष्ट देखेपछि पहिलोपटक आफुलाई गलकोट नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरिक्षक मिनराज गैरेले फोन गरि स्वास्थ्य अबस्थाबारे सोधेर सामाजिक सञ्जालमा आएको सन्देश बारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अध्यक्ष मगरले आफूलाई कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नभएको र गाउँमै काम गरेर बसि रहेको भन्दै यसले आफ्नो शुभ चिन्तकहरुमा असर पुगेको बताउनुभयो । आफूले यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा जानकारी गराएको भन्दै उहाँले आइतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) मा उजुरी दिने बताउनुभयो ।
यसैबिच सामाजिक संजाल फेसबुकमा श्रद्धाञ्जली दिएको गलकोट आपडेट फेसबुक पेजले उत्त पोष्ट हटाएपछी माफी माग्दै पोष्ट गरेको छ ।
उत्त पोष्टमा आज म आफैसङ्ग लज्जित छु । मैले हतार गर्दा, मेरो हतारको गल्तिले धेरै जनालाई हानि पुर्यायो । म कुन शब्दले क्षमा मागु म सङ्ग त्यो शब्द छैन । काठमाडौं देखि गलकोट आएर सुतेको थिए, लामो दुरि यात्रा गरेको भएर शरिर थाकिरहेको थियो ।
यत्तिकैमा मोबाईल खोल्दा पाण्डवखानीका सुरेश छन्त्यालले अनेक शब्दहरूले सम्बोधन गरेको तष्विर वडा अध्यक्ष तिलक मगरको देखे । मेरो आँखाले गतल देख्यो, हातले गलत लेख्यो, मनले फरक बुझ्यो र म बाट गल्ति हुन पुग्यो । मैले श्रतद्वान्जलि लेख्न पुगेछु । करिब १ मिनेटमा मैले त्यो पोष्ट डिलिट गरे किनकि उहाँ सकुसल भएको खबर पाए । म आर्दणिय दाजु तिलकलाई सधै सम्मान गर्छु, म कहिलै उहाँप्रति नकरात्मक छैन ।
मैले उहाँलाई नराम्रो बनाउन, कसैले उक्साएर लेखेको होईन । हतारमा लेख्दा उहाँको व्यक्तिगत, परिवार, आफन्तमा नराम्रो असर पुग्यो । सक्नुहुन्छ दाई दुई हात जोडेर माफि माग्छु । हजुर मेरो नजरमा सधै आशालाग्दो मान्छेको सुचिमा गनिनुहुन्थ्यो, गनिनुहुन्छ ।
त्यसैले त मैले श्रध्दाञ्जलि शब्द लेख्दा भगवानलाई समेत गालि गरिरहेको थिए । आर्दणिय दाई तिलकले राखेको पोष्टमा सयौले गालि गर्नुभएको छ । म हजुरहरू सबैको गालि सुझावको रूपमा लिन्छु, जसले गर्दा आगामि दिनमा म बाट यस्ता गल्ति नहुन । म गलकोट अपडेट पेजमार्फत गलकोटका हरेक गतिबिधि देश तथा विदेशमा पुर्याउने काम गरिरहेको छु, गर्दै जानेछु । कहिलेकाहि जानिजानि कहिलै गल्ति गर्ने छैन ।
अन्जानमा गल्ति भए हजुरहरूको सुझाव, सल्लाह, आलोचना सह्रष ग्रहण गर्ने छु ।अन्त्यमा पनि दाई सक्नुहुन्छ आफनो भाई सम्झेर माफ गर्नुहोला । र अन्य उहाँका परिवार, ईष्टमित्र, आफन्तजन, साथिभाई सम्पुर्णमा समेत दुई हात जोडेर क्षमा चाहन्छु । उल्लेख गरिएको छ ।